War Deg Deg ah:Ciidamada Soomaaliland oo isaga cararey Duleedka Dhahar, iyo ciidamada Puntland oo haatan Gacanta ku haya magaalada Dhahar…. | maakhir.com
War Deg Deg ah:Ciidamada Soomaaliland oo isaga cararey Duleedka Dhahar, iyo ciidamada Puntland oo haatan Gacanta ku haya magaalada Dhahar….
Magaalada Dhahar ayaa waxaa shalay galab dagaal ku dhex marey ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland halkaasoo labada ciidan soo kala gaarey qasaare aan la sheegin. Waxaase magaalada ku dhintey wiil yar laba gabdhoodna ku dhaawacmeen.
Tan iyo shalay galab ilaa iyo xalay ayaa waxaa deegaanada hoos yimaada dhahar iyo guud ahaanba gobolka Sanaag isku uruur sanayay ciidamo beeleedyo ku abtirsada Deegaamada gobolka Sanaag, Sidoo kale waxaa kaloo deegaanka dhahar soo buux dhaafiyey cutubyo ka tirsan ciidanka Darwiishta oo iyagu damacsanaa in ay afarta gees kasoo galaan ciidamada.
Saaka aroornimadii mar aan is iri booqo goobtii ay deganaayeen Ciidanka S/land oo ah galbeedka duleedka Magaalada ayaa waxaa iga hor yimid dad reer guuraa ah oo ii sheegay in ay ciidankii xalay isaga hayaameen iyaga oo baxsad ah si uusan waagu ugu baryin duleedka magaalada. Mar aan khadka tilifoonka kula xidhiiday magaalada Xingalool ayaa iyaguna ii xaqiijiyey in Ciidan xawli miyir la’aan ah ku socda ay dhaafeen duleedka magaalada meel u muuqata iyagoo u huleeley jihada woqooyi galbeed una muuqday dad dhaawac badan la ordaayay.
Shacabka reer Dhahareed ayaa walaac ka muujiyey colaada ka oloosantay hoostooda haseyeeshee ku kala qeybsan fikradaha iyo sida loo xalin lahaa dabka ka hurey agtooda.
Ciidanka Darwiishta iyo ciidamo beeleedka duleedka magaalada fadhiya ayaa waxay shir la qaateen Isimada iyo odayaal dhaqameedka magaalada saakana ay ka quraacdeen magaalada dhexdeeda.
Mar aan wareystey sarkaal ka tirsan ciidanka Puntland ayaa ii sheegay in ay daba socdaan firxadkii maleeshiyada S/land oo haatan sida uu sheegay ay ku raad joogaan.
Wixii kasoo kordha kala soco dhahar.com
« “Somalia Seized with Statis”
War deg deg ah: Somaliland oo ka baxday Dhahar iyo Xinglool oo laga sii rasaaseyey, waa maxay sababtu? »